Tag: redirection ngwa mgbakwunye | Martech Zone
Tag: redirection ngwa mgbakwunye
Fraịde, Ọgọstụ 6, 2021 Tuesday, August 24, 2021 Douglas Karr
Ime ka usoro URL gị dị mfe bụ ụzọ dị mma iji bulie saịtị gị maka ọtụtụ ebumnuche. Ogologo URL siri ike ịkekọrịta n'etiti ndị ọzọ, nwere ike ebipụ ya na ndị editọ ederede na ndị ndezi email, yana usoro nchekwa URL dị mgbagwoju anya nwere ike izipu akara na -ezighi ezi na igwe nchọta na mkpa ọdịnaya gị. YYYY/MM/DD Permalink Structure Ọ bụrụ na saịtị gị nwere URL abụọ, olee nke ị chere ga -enyela isiokwu ahụ nnukwu mkpa?
N'ime izu ole na ole gara aga, anyị na-enyere onye ahịa aka ịmegharị mgbagwoju anya na WordPress. Onye ahịa ahụ nwere ngwaahịa abụọ, nke abụọ abụrụla ndị ama ama ruo n'ókè na ha ga-ekewapụ azụmahịa, akara ngosi, na ọdịnaya ahụ iji kewaa ngalaba. Ọ bụ nnọọ ọrụ! Ha dị na ngalaba na-anọ na-etinye, ma ọhụrụ na ngalaba ga-niile ọdịnaya na-akwanyere na ngwaahịa… si oyiyi, posts, ikpe